Sida WhatsApp Sawirada loogu diro adigoon tayadoodu lumin | waxaan ka imid mac
Sida sawirada loogu diro WhatsApp adigoon lumin tayada
Qolka Ignatius | | La cusboonaysiiyay 17/02/2022 22:32 | Tababarada
WhatsApp ayaa waligiis lagu sifeeyay sida madal in si gaar ah u taxaddar tayada sawirada. Dhab ahaantii, aad ayuu ula dhaqmaa iyaga. Ilaa xad waxaa la fahmi karaa in ay sameyso sidaas darteed soo dirida sawiradu waa geedi socod degdeg ah iyo in aysan cunin xog badan oo mobile ah, si kastaba ha ahaatee, waa in ay sidoo kale siiso isticmaalaha ikhtiyaarka ah in uu doorto in uu ku cadaadiyo sawir ama yaysan noqon ka hor inta aan la wadaagin.
Telegramka, dhibkaas ma hayno, tan iyo, laga bilaabo codsiga laftiisa, waxaan dooran karnaa haddii aan rabno inaan ku cadaadineyno sawirada ama u dirno xallinta asalka ah, ikhtiyaarka ah, hadda, uma eka inuu ku jiro qorshayaasha mustaqbalka ee Meta, sida shirkadda maamusha shabakadda. hadda waxaa loogu yeeraa bulshada Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus ...
Nasiib wanaag, dhibaatadan, waxaan gacanta ku haynaa xalal kala duwan, in kasta oo ayan ahayn kuwo dareen leh sida kuwa ay bixiso Telegram. Hadii aad rabto inaad ogaato cSida sawirada loogu diro WhatsApp adigoon lumin tayada, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1 U wadaag sawirada sidii faylal ahaan
2 La wadaag xiriirinta sawirada
3 Laga soo bilaabo iCloud
4 Laga soo bilaabo iCloud oo leh Boostada
5 Iyadoo WeTransfer
U wadaag sawirada sidii faylal ahaan
Haddii aynaan rabin in aan isticmaalno codsiyo kale si aan u wadaagno sawirada xalintooda asalka ah, xalka WhatsApp ayaa na siinaya La wadaag sawirada iyo fiidyaha sidii inay fayl yihiin.
Haa, WhatsApp kaliya ma ogola inaan wadaagno sawirada iyo fiidiyowyada, laakiin sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan wadaagno nooc kasta oo faylal ah, in kasta oo geeddi-socodku yahay mid aan caqli-gal ahayn.
para la wadaag sawirada WhatsApp ka iPhone adigoon lumin tayada, waa inaan fulino talaabooyinka soo socda:
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in aan samayno waa in aan ka doorano dhammaan sawirada aan rabno in aan wadaagno codsiga sawirada iyo ku kaydi abka Files-ka.
Marka xigta, waxaan aadeynaa WhatsApp, guji clip-ka iyo, halkii aan ka dooran lahaa Photo, waxaan dooraneynaa Dukumeentiga.
Marka xigta, waxaan aadeynaa gal meesha aan ku kaydinay sawiradayada, waanu dooranaynaa oo guji Open.
Waxaan sidoo kale awoodnaa la wadaag sawirada WhatsApp ka our Mac iyada oo aan tayada lumin, iyada oo loo marayo tillaabooyinka aan ku tusi doono hoos:
Marka hore, aan booqano web.whatsapp.com waxaanan ku xidhi karnaa WhatsApp-kayaga iPhone-ka iyo shabakadda.
Marka xigta, dhagsii badhanka Ku dhejiso oo guji Dukumeentiga.
Marka xigta, waxaan tagnaa hagaha halka ay ku taal sawiro oo dooro.
Haddii aan ku kaydsannay Sawirrada, tiirka midig, ee qaybta Muuqaal, waxaan xulanaa Fotos si dhammaan waxyaabaha ku kaydsan codsiga loo soo bandhigo, sida aan ku arki karno sawirka kore.
La wadaag xiriirinta sawirada
Mid ka mid ah hababka ugu fudud haddii aad isticmaasho mid ka mid ah meelaha kala duwan ee kaydinta daruuraha si aad u kaydiso nuqul ka mid ah sawiradaada sida iCloud, Google Photos, Amazon Photos, OneDrive, Dropbox waa la wadaag sawirada adigoo isticmaalaya xiriiriye.
Dhammaan goobaha kaydinta daruuraha ayaa noo ogolaanaya inaan dooro sawirada iyo fiidyaha si aad ula wadaagto xiriiriye. Markaad gujiso xiriirkan, qaatayaashu waxay heli karaan macluumaadka la wadaago iyaga oo aan ka mid noqon macaamiisha goobta la isticmaalo.
Si aan sawirada ugu wadaagno goobta kaydinta daruuraha, waa in aan furnaa codsiga, dooro sawiro in aan rabno in aan wadaagno iyada oo aan tayada lumin, dhagsii badhanka share iyo ugu dambeyntii gudaha Abuur xiriiriye.
Laga soo bilaabo iCloud
Haddaynu shaqaalaynay meel kaydinta daruur la Apple, waxaan si toos ah ula wadaagi karnaa isku xirka sawirada codsiga sawirada, isku xirka aan si toos ah uga abuuri karno codsiga laga heli karo iOS ama codsiga laga heli karo macOS.
Marka isku xirka la sameeyay, tani waxa lagu kaydin doonaa sanduuqa qalabkayaga. Ugu dambeyntii, waa inaan wadaagnaa xiriirkaas anagoo ku dhejineynaa fariin WhatsApp ah.
Markaad gujiso xiriirkaas, Qof kastaa wuu gali karaa sawiradan iyo/ama fiidyaha oo aan hore u soo xulnay. Si loo soo dejiyo iyaga, kaliya waa inay gujiyaan badhanka soo dejista. Sawirada iyo fiidiyowyada lagu daray waxay diyaar noqon doonaan 30ka maalmood ee soo socda.
Laga soo bilaabo iCloud oo leh Boostada
Apple waxay soo bandhigtay muuqaal cusub oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay wadaagaan faylal waaweyn, iyagoo isticmaalaya madal emailkooda, taas oo ah, iyada oo loo marayo akoonkeena iCloud.
Nidaamku waa mid fudud sida abuurista iimaylka oo lagu daro dhammaan sawirada sida lifaaqyada. Markaad gujiso badhanka diritaanka, halkii aad u diri lahayd qaataha, Apple waxay ku dhejin doontaa daruuraha iyo waxay abuuri doontaa isku xirka iCloud laga bilaabo meesha isticmaalayaashu ay ka soo dejisan karaan dhammaan faylasha aan rabno inaan wadaagno.
Dhamaan faylasha waa la heli karaa 30 maalmood. Markaad gujiso xiriirkan, waxaan arki karnaa oo soo dejisan karnaa dhammaan sawirada xalkooda asalka ah.
Shaqadan sidoo kale waxaa laga heli karaa Mac ah isticmaalaya @ iCloud.com account Shaqadani ma aha mid laga heli karo meel kasta oo email kale, sidaas darteed waa in aad ka taxadirtaa markaad isticmaalayso shaqadan adoo isticmaalaya koontada iCloud sida soo diraha.
Habka wadaagga sawirada habkan, waa gaabis, maadaama ay tahay in aan sugno sawirada lagu dhejiyo server-ka, habraaca qaadan kara waqti ka badan ama ka yar iyadoo ku xiran xawaaraha cusub ee isku xirka.
Yaa yidhi WeTransfer wuxuu leeyahay madal kasta oo kale oo la heli karo iyo internetka wadaaga galalka waaweyn, faylal aynaan iimayl u diri karin.
Inkasta oo madal noocan ahi aanay ku jihaysanayn in sawirro la diro, balse la wadaago dukumeenti iyo muuqaalo waaweynWaxaan si fudud u isticmaali karnaa si aan ugu dirno sawiro badan oo ku jira xalintooda asalka ah.
Adigoo sawirada ku dhejinaya WeTransfer oo gujinaya badhanka diritaanka, madal abuuri doona url, URL oo ay tahay in aan la wadaagno dadka aan rabno in aan u dirno sawirada xalkooda asalka ah.
Iyada oo ku xidhan haddii aan isticmaalno nooca bilaashka ah ama lacagta la bixiyo, wakhtiga ugu badan ee xiriirinta la heli karo way kala duwanaan kartaa. Nooca bilaashka ah ayaa noo ogolaanaya soo dir faylasha ugu badnaan 2 GB, faylasha la heli karo 7 maalmood.
WeTransfer waxay diyaar u tahay iOS, wuxuu u baahan yahay ugu yaraan nooca 14 wuxuuna noo ogolaanayaa inaan wadaagno nooc kasta oo fayl ah oo aan ku kaydsanay aaladdayada, oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha aan ku abuurnay kamarada iPhone ama iPad-kayaga.
Sidoo kale waa diyaar u ah macOS sida codsi ku yaal bar menu-ka sare, waa codsi noo ogolaanaya inaan galno fayl-garaynta goobta la wadaago anagoon marin shabakadeeda. Codsigan wuxuu u baahan yahay macOS 10.12. Haddii qalabkaaga aan la taageerin, waxaad kula wadaagi kartaa sawirada adiga bogga internetka
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida sawirada loogu diro WhatsApp adigoon lumin tayada
Sida loo sameeyo Memoji on iPhone
Baro wax kasta oo la xidhiidha heerka cusboonaysiinta ee aaladahaaga Apple